နံနက်ပိုင်းတွင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်တက်ခြင်း - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » ဆီးချိုသွေးချို » နံနက်ပိုင်းတွင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်တက်ခြင်း
ရေးသားသူ Dr.Thant Zin ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe.
နံနက်ပိုင်းတွင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်တက်ခြင်း
သင့်အနေနဲ့ ဆီးချိုရောဂါအတွက် အင်ဆူလင်သုံးစွဲ နေပေမယ့် မနက်ပိုင်းမှာ သကြားဓာတ်ဟာ များနေပါသလား။ ဆရာဝန်များဟာ ဒီကိစ္စရဲ့ အကြောင်းရင်း ၂ချက်ကို ပြောပြတတ်ပါတယ်။
နံနက်ပိုင်းတွင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်တက်ခြင်းဖြစ်စဉ် (Dawn Phenomenon)။ ဒါဟာ အိပ်ပျော်နေစဉ် သဘာဝ ကိုယ်တွင်း ပြောင်းလဲမှုများရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းပါပဲ။ မနက် ၃နာရီနဲ့ ၈နာရီကြားမှာ အင်ဆူလင်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ တချုိ့ဟော်မုန်းတွေ ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်ထဲ ၀င်ရောက်သွားပြီးချိန်မှာတော့ ညဖက်မှာသုံးခဲ့တဲ့ အင်ဆူလင်ကို ပျက်ပြယ်စေပြီး သကြားဓာတ်ကို တက်လာစေပါတယ်။
Somogyi သက်ရောက်မှု။ ဒီအကြောင်း ပထမဆုံး ရေးသားခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်အမည်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး တန်ပြန်ဂလူးကို့စ်ဓာတ်များခြင်း လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ မနက်ပိုင်းမှာ သကြားဓာတ်များနေရခြင်းဟာ သကြားဓာတ် ကျဆင်းခြင်းနောက်ပိုင်းမှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အခြေအနေပါ။ ညလယ်ခေါင်မှာ သကြားဓာတ်ဟာ ထိုးကျကောင်းကျနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို တန်ပြန်ဖို့ ကိုယ်ခန္ဓာဟာ ဟော်မုန်းတွေကို ထုတ်ပါတယ်။ အင်ဆူလင်ထုတ်တာများပြီး ညအိပ်ရာဝင်ချိန် အစာသိပ်မရှိတဲ့အခါ ဒီသက်ရောက်မှု ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။
မနက်ပိုင်း ဆီးချိုတက်ရခြင်းအကြောင်းကို သိနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်က သင့်ကို မနက် ၂နာရီနဲ့ ၃နာရီကြား ညစဉ်လိုလို သွေးစစ်ဖို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဆီးချိုကျနေမယ်ဆိုရင် Somogyi သက်ရောက်မှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန် ဒါမှမဟုတ် မြင့်တက်နေမယ်ဆိုရင် Dawn phenomenon ကြောင့်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
နံနက်ပိုင်းတွင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်တက်ခြင်းဖြစ်စဉ် (Dawn Phenomenon) ဆိုတာဘာလဲ
မနက်ခင်းတိုင်း အများအားဖြင့် ၂နာရီနဲ့ ၆နာရီကြား ဂလူးကို့စ်ဓာတ်ဟာ ၁၀ ကနေ ၂၀ယူနစ်အထိ မြင့်တက်တဲ့ အခြေအနေကို ခေါ်ပါတယ်။ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အမျိုးအစား (၁) မှာ ဖြစ်တာ ပိုများပါတယ်။
Dawn phenomenon နဲ့အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါ
သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သင်အိပ်နေချိန်မှာ သဘာဝအပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ တချို့ဟောမုန်းတွေကို မြင့်တက်လာစေပါတယ်။ အင်ဆူလင်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေ မြင့်တက်လာပြီးတဲ့အခါ ဂလူးကို့စ်ဓာတ်ကို သဘာဝအလျောက် ကျဆင်းစေခြင်းမှ တားဆီးလိုက်ပါတယ်။ သုတေသီတချို့ဟာ ဒီဟော်မုန်းတွေထွက်လို့ ဆီးချိုတက်ရတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မနက်ပိုင်းမှာ ဆီးချိုတက်ရတာ တခြားအကြောင်းတွေကြောင့်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဆီးချိုကို ဂရုမစိုက်ရင်လည်း ပုံမှန်ထက် မြင့်နေနိုင်ပါတယ်။ အင်ဆူလင်မလုံလောက်တာ၊ ဆေး အချိန်အဆမမှန်တာ၊ ညအိပ်ချိန်မှာ ကစီဓာတ်များတာတွေစားတာဟာ အိပ်နေစဉ်မှာ ဂလူးကို့စ်ကို မြင့်တက်စေပါတယ်။
နံနက်ပိုင်းတွင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်တက်ခြင်းဖြစ်စဉ် (Dawn phenomenon ) ကုသခြင်း
သင့်ရဲ့ဂလူးကို့အတိုင်းအတာကို မှတ်ထားရမယ့်အပြင် ဘာစားတယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဆေးသောက်တယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ အင်ဆူလင်ထိုးတယ်ဆိုတာ မှတ်ထားဖို့ ဆရာဝန်က သင့်ကို ပြောပါလိမ့်မယ်။ ညဘက်တွေထခိုင်းပြီး ၂နာရီနဲ့ ၃နာရီကြား ညပေါင်းများစွာ ဆီးချိုစစ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှသာ ဆီးချိုတက်နေရခြင်းဟာ သဘာဝအပြောင်းအလဲကြောင့်လား၊ တခြားအကြောင်းလားဆိုတာ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီအချက်အလက်တွေကိုသုံးပြီး သင့်ရဲ့ဆေးဝါး၊ အင်ဆူလင် ပမာဏကို ချိန်ဆတာ၊ ဆေးပြောင်းပေးတာ၊ အင်ဆူလင်ထိုးတာ စတာတွေလုပ်ဆောင်ပြီး မနက်စောစောပိုင်းတွေမှာ အင်ဆူလင်ဓာတ်အပိုကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးတွေ အာဟာရမချို့တဲ့အောင် ကာကွယ်နိုင်ဖို့
ဆီးချိုရောဂါနောက်ဆက်တွဲများ – သွေးတွင်း အင်ဆူလင်ဓာတ်မြင့်မားခြင်းဟာ ဆီးချိုရောဂါနှင့် ဆက်စပ်ပါသလား။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောကျတိုဘာ 13, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း အောကျတိုဘာ 13, 2017
Johns Hopkins Guides: Dawn Phenomenon. (n.d.). Johns Hopkins Guides: Antibiotic (ABX),
HIV, & Diabetes Guides.
The Dawn Phenomenon. (n.d.). DOC NEWS.
Dawn Phenomenon. American Diabetes Association.
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ခံစားနေရသော ကလေးငယ်အတွက် စိတ်ချရသော ကလေးထိန်း
ဆီးချိုသွေးချိုရှိသော သင့်မိဘ အပြေးလေ့ကျင့်နိုင်ရန် ဘယ်လိုကူညီကြမလဲ